Gadzira Slideshow muMifananidzo yeMac | Ndinobva mac
Gadzira inoshamisa foto slide show pane yako Mac neiyo Mifananidzo app
Pedro Rodas | | apuro, Tutorials
Iyo yekushandisa Mifananidzo iyo Apple yaita kuti iwanikwe kwatiri nguva pfupi yadarika inoenderera ichitaura uye ndeyekuti chikamu chimwe nechimwe chayo chakagadzirwazve nekuvandudzwa, kuve zvakanyanya kutsetseka kushanda kwese kupfuura yakatangira iPhoto.
Muchikamu chino tiri kuzokuratidza sei gadzira chirongwa ita kuti ipfuure mifananidzo mairi isu tichakwanisa kusarudza mhando yeshanduko, nguva dzekutamba, mameseji ekuratidzira uye mimhanzi kuti inzwike.
Kana iwe watoshandisa sarudzo iyi muPhoto yekare uchaona kuti zvinhu zvakagadziridzwa zvakanyanya. Apple yanga ichida kusimbisa ruzivo rwevashandisi uye pakanga pasati paine otomatiki maitiro aisatibvumidza kuti tishandure chero chimiro chekuraira kwemifananidzo, iwo mavara akabuda kana mimhanzi yaishandiswa, ikozvino yapa twist uye isu tinowana inochinja-chinja maitiro inopa yakawanda kutamba uye izvo zvinotibvumidza isu kuti tiite basa riri nani.
Kutanga kugadzira dhizaini yemufananidzo muApplication application, unofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Isu tinovhura iyo Photos application uye kumusoro tinodzvanya pane Mapurojekiti tebhu. Kutevera tinya pa "+" izvo zvinoonekwa kurudyi uye tinosarudza «Slide show».
Iwindo rinobuda rioneka roga umo tinobvunzwa zita ratiri kuda kuratidza iwo masiraidhi. Patinodzvanya OK, hwindo idzva rinovhura kwatinofanira kusarudza iyo mifananidzo yatinoda kuverengerwa mupasipoti.
Mushure mekusarudza yega uye yega yemifananidzo iwe yaunoda kuisa tinya pa Wedzera kumusoro kurudyi kwewindo. Iwindo rekutungamira kwesiraidhi rinovhura ipapo. Muchikamu chepakati kuratidzwa kwezviri kuitwa kunoratidzwa.
Muchikamu chezasi chehwindo tinogona kuona chimwe chezvinhu zvitsva zveMifananidzo uye ndeyekuti iyo nguva yenguva yeslide show inoonekwa munguva chaiyo, kuitira kuti tikwanise kugadzirisa maratidziro achazoitwa imwe yemifananidzo.
Padivi rerudyi pane matatu ma icon kubva kwatichakwanisa kubata zvese zvine chekuita nesiraidhi show. Sezvauri kuona, une sarudzo dzisingaperi idzo Vachaita kuti iwe upfuure iwe funga yemhando yepamusoro.
Zviripachena kuti izvo zvatatsanangura hazvigone kutsiva zvirongwa zvakanangana nezvakadai seKeynote kana PowerPoint, asi zvinotibvumidza kuita vhidhiyo diki nekukurumidza uye semi-otomatiki nemifananidzo yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Gadzira inoshamisa foto slide show pane yako Mac neiyo Mifananidzo app
ZVINONatsojeka. CHANDISINGAZVIZIVA KUTI UNGASVIRA SEI FILEI uye NZIRA DZEKUNOGONA KUITUMIRA NEEMAIL KANA ZVIMWE ZVINODIWA.
Tesla inoda kuti Apple ipinde muindasitiri yemotokari
Hub + yakanaka hub yeiyo USB-C yeMacbook nyowani